Cathy Doll(Buy 1 Get 1 Free) Shimmer Mist 236 ml | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ညအိပ်ဝတ်စုံများ အသုံးအဆောင်များ အမျိုးသားများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသား) ဂျင်းဘောင်းဘီများ ရှပ်များ နာရီများ အိတ်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသမီး) ဂါဝန်များ အိတ်များ နာရီများ လက်ဝတ်ရတနာများ TOP BRANDS TIMBERLAND NICHII OUTDOOR PRODUCTS COZY CORNER SPRINGFIELD YANGOODS အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးသုံး အမျိုးသားသုံး မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ အလှပြင် ပစ္စည်းများ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများ မျက်နှာအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာအတွက် အလှအပရေးရာ စက်များ လက်သည်းအလှအပ ခြေ/လက်အလှအပ လက်သည်းနီ/ခြေသည်းနီများ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရေအတွက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိရိယာများ ဖြည့်စွက်ဆေးများ Top Brands MAYBELLINE YVES ROCHER MA'SURI POND'S L'oreal ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများ ခလုတ်ဖုန်းများ ကြိုးဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်များ စမတ်နာရီများ နားကြပ်များ စပီကာများ မမ်မိုရီကတ်များ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အကာ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးများ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါဘန့်များ တက်ဘလက်များ iPadများ ၈လက်မနှင့်အထက် ၈လက်မအောက် TOP BRANDS SAMSUNG XIAOMI APPLE SONY HUAWEI LENOVO ကွန်ပြူတာများ လက်ပတော့ပ် များ နုတ်ဘုတ်များ Macbook များ ပရင်တာနှင့်စကန်နာများ ဘက်စုံသုံးပရင်တာများ လေဆာပရင်တာများ ရုံးသုံးပရင်တာများ ဟာ့ဒစ်စ်နှင့်မန်မိုရီကဒ်များ ဟာ့ဒစ်စ်များ မမ်မိုရီကဒ်များ မမ်မိုရီ စတစ်များ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ လက်ပတော့ပစ္စည်းများ နားကြပ်နှင့် စပီကာများ ကီးဘုတ်များ ဒီဗီဒီစက်များ နက်ဝေါ့ပစ္စည်းများ ပရောဂျက်တာများ အခြားပစ္စည်းများ မောက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ကာဗာနှင့်အိတ်များ ဘတ်ထရီ နှင့် အားသွင်းကြိုးများ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ ဒက်စတော့်ပ်နှင့်မော်နီတာများ All-in-ones တာဝါများ မော်နီတာများ TOP BRANDS Acer HP Asus ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ အိမ်သုံးဂိမ်းစက်များ အိတ်ဆောင်ဂိမ်းစက်များ ဂိမ်းစက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းခွေများ Playstation ဂိမ်းခွေများ Xbox ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Nintendo Wii ဂိမ်းခွေများ Nintendo DS ဂိမ်းခွေများ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကင်မရာများ ကင်မရာများ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာများ ပိုလာရွိုက်ကင်မရာများ ဗီဒီရိုကင်မရာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မမ်မိုရီကဒ်များ ဆယ်လ်ဖီစတစ်များ ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ တီဗီများ LED တီဗီများ စမတ်တီဗီများ Blu Ray နှင့် DVD စက်များ DVD Players Blu Ray Players iPod နှင့် MP3 များ နားကြပ်များ MP3 နှင့် အသံဖမ်းစက်များ စပီကာနှင့်အသံချဲ့စက်အသေးများ တီဗီ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3D မျက်မှန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်စနစ်များ စပီကာစနစ်များ စပီကာများ စပီကာများ ဒီဂျေ နှင့် ကာရာအိုကေ Hi-Fi စနစ် ကားဂျီပီအက်စ်နှင့်အသံစနစ်များ ကားတွင်းသုံးတီဗီများ TOP BRANDS Samsung Panasonic Philips Sony JVC အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းအကြီးများ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ပန်ကာများ လေအေးပေးစက် အ၀တ်လျှော်စက် အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ ဖုန်စုပ်စက်များ မီးပူ ရေနွးအိုးနှင့်ရေပူပေးစက်များ လေသန့်စင်ပေးစက် ရေပူ၊ရေအေးစက် အ၀တ်အထည်ထိန်းသိမ်းမှု ရေသန့်စက်များ လျှပ်စစ်မီးများ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထမင်းပေါင်းအိုး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို ဟင်းချက်ပစ္စည်းများ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ အိမ်ပြင်ပသုံးစက်ကိရိယာများ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ အိမ်သုံး ရုံးသုံး TOP BRANDS Samsung New World Hisense ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ စက်ကိရိယာများ ကလေးများအတွက် ကလေးငယ်များ စောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများ အသုံးအဆောင်များ အခြားကလေးသုံး ပစ္စည်းများ ကစားစရာများ Hand Fidget Spinners TOP BRANDS NUBY Mamy Poko စားသောက်ကုန်များ စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်များ စားသောက်ကုန်များ အချိုရည်များ ၀ိုင်နှင့်ယမကာများ အားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး အားကစား စကိတ်ဘုတ်များ ပြင်ပအားကစား ဘတ်စကတ်ဘော ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး အားကစားပစ္စည်းအကြီးများ အားကစားပစ္စည်းအသေးများ အားကစားအ၀တ်အထည်များ အားကစားအသုံးပြုပစ္စည်းများ အခြား အကြောင်းအရာကဏ္ဍများ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်သုံးပစ္စည်းများ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ စာအုပ် နှင့် စာရေးကိရိယာများ ဈေးဝယ်လှည်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင် Login ပင်မစာမျက်နှာ အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးများအတွက် Cathy Doll (Buy 1 Get 1 Free) Shimmer Mist 236 ml Cathy Doll (Buy 1 Get 1 Free) Shimmer Mist 236 mlBy Cathy Doll (17) သုံးသပ်ချက် ရေးရန် > ဆိုဒ်/အရောင်ကွဲ # Dark Kiss # Japanese Bloosm # Twilight Woods # White Citrus ... အသေးစိတ် ကြည့်ရှုရန် အဓိက အကြောင်းအရာများချိုမွှေးသောအနံ့ရှိခြင်း၎ နာရီမှ ၆ နာရီအထိ ခံခြင်းမည်သည့်ရာသီဥတုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ် သင့်တော်ခြင်းသင်းပျံ့မွှေးကြိုင်စေခြင်း vanilla အနံ့နှင့် သစ်သီးများပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော အနံ့ဖြစ်ခြင်း Ks 11,500 ယခု ၀ယ်ယူရန် မှတ်ထားရန် ရောင်းချသူ7Seas Winner Trading Co.,Ltd ပစ္စည်းပို့ရန် ကြာချိန်2-7ရက် ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါသည်။ ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ် ၇ရက်အတွင်း အခမဲ့ပြန်ပို့နိုင်မှု အသေးစိတ်ကြည့်ရန် : Return Policy ကုန်ပစ္စည်း စစ်မှန်မှု သုံးသပ်ချက်များဖော်ပြချက်အညွှန်းအချက်အလက်များပြန်ပို့ခြင်း/ပြန်အမ်းငွေရယူခြင်း5မှတ် (10)4 မှတ် (3)3 မှတ် (3)2 မှတ် (1)1 မှတ် (0)
ပျမ်းမျှအမှတ်ပေးချက် 4,317 နှုန်းအား အခြေခံ၍ ဤကုန်ပစ္စည်းအား သင်ယခင်က သုံးစွဲဖူးပါသလား?5432 1 သုံးသပ်ချက် ရေးရန် အမျိုးအစား ခွဲခြားရန် ပြုလုပ်သည့် နေ့စွဲ အမှတ်ပေးချက်အများဆုံး အဆိုးဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက်အားလုံးNilar2017 ဇူလိုငျ4ExcellentCathy Doll Shimmer Mist 236 ml အနံ့လေးကသင်းတယ် နေ့တိုင်းသုံးဖြစ်တယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်Cho Thet Oo2017 ဇှနျ 22 GoodCathy Doll Shimmer Mist 236 ml အနံ့လေးက ယဉ်ပြိးသင်းနေတာပဲ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်မြတ်သန္တာအောင်2016 ဩဂုတျ9Cathy DollCathy Doll က body mist တွေထဲမှာ ဒီအနံ့လေးကိုအကြိုက်ဆုံးပါ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်May Hnin Phyu2016 ဩဂုတျ9Cathy Dollအနံ့လေးကောင်းပါတယ်။ မွှေးပြီး တစ်နေကုန် လန်းဆန်းစေလို့ အရမ်းသဘောကျပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်Thinzar chan2016 မေ 13 Japanese Blooms အနံ့ကိုအရမ်းကြိုက်တယ် It feels fresh and good. I love the shimmer mist expecially japanese blooms smell. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်Suu 2016 မေ6Fresh & FunWe can choose among various fragrances that are long lasting and have fun with the blend of fresh and modern fragrance. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်မေသူလွင်2015 ဒီဇငျဘာ 28 အရမ်းကြိုက်တဲ့အနံ့ပါCathy Doll Shimmer Mist ရဲ့ အနံ့လေးကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ တအားမစူးဘဲ သင်းသင်းလေးမို့လို့အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန် Shimmer mist ရေမွှေးဟာ တနေ့ တာသင့်ကိုမွှေးကြိုင်လန်းဆန်းစေမှာဖြစ်တယ်။ အသားကိုယားယံစေခြင်းမရှိပါ။ Dark Kiss ကတော့ နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် နက်မှောင်တဲ့ ဘယ်ရီသီးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေမည့် ရနံ့တွေကိုပေးမှာဖြစ်သည်။ Japanese Bloosm ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှချယ်ရီပန်းခင်းထဲရောက်သွားတဲ့အတိုင်းသင်းပျံ့ တဲ့ ချယ်ရီရနံ့ နဲ့သနပ်ခါးတို့ ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Carried Away က raspberries, jasmine & whipped vanilla, တို့ ကိုပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ မှန်ကန်တဲ့ချစ်ခြင်းရဲ့ အငွေ့ အသက်တွေကိုယူဆောင်လာမှာနော်။Twilight Woods ကတော့နွေးထွေးနဲ့ ကြည်နူးမှုတွေကိုမွေးဖွားပေးတဲ့ သစ်ခေါက်ရနံ့နဲ့ တရုတ်ဇီးသီးရဲ့ ဝတ်ရည်၊ ထိကရုံးတို့ ရဲ့့ပေါင်းစပ်မှုဟာလည်းညှို့ ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကလည်းအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ်.။ White Citrus ရှောက်ဖြူ နှင့်ကြာပန်းတို့ နဲ့ ဖော်စပ်ထားတဲ့ အလွန်ရနံ့ သင်းသောရေမွှေးဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝရဲ့ ရနံ့ သင်းသင်းလေးကသင့်ကိုလန်းဆန်းစေမှာပါ။ ရေမွှေးတွေအားလုံးကတော့ အနံ့ ကြာကြာခံနိုင်ပြီး သဘာဝသစ်သီး သစ်ဖုပန်းမာန်တွေကနေထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ရာသီဥတုမရွေးသင့်တော်ပြီး စိတ်ကြိုက်အနံ့ လေးတွေရွေးလိုက်ပါနော်။ အဓိက အကြောင်းအရာများချိုမွှေးသောအနံ့ရှိခြင်း၎ နာရီမှ ၆ နာရီအထိ ခံခြင်းမည်သည့်ရာသီဥတုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ် သင့်တော်ခြင်းသင်းပျံ့မွှေးကြိုင်စေခြင်း vanilla အနံ့နှင့် သစ်သီးများပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော အနံ့ဖြစ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် (Buy 1 Get 1 Free) Shimmer Mist 236 ml SKUCA791HBAA67GNAFAMZ မော်ဒယ်လ်885884200993 Weight (kg)0.03 ပြန်လည်ပို့ဆောင်၍မရပါ